Global Voices teny Malagasy » Ataon’ny Makedonianina Vazivazy Ny Mikasika Ilay Fifanolanana Amin’i Gresy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Jona 2018 2:39 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Nancy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Eoropa Andrefana, Gresy, Makedonia, Fahalalahàna miteny, Fifandraisana iraisam-pirenena, Hehy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
“Boum, boum…” – sary mampihomehy iray nataon'i Darko Markovikj mitantara ny fahitany ny don-tratran'ny nasionalista makedonianina, navoakan'ny Citizens for European Macedonia  tamin'ny 2011. Nahazoana alàlana.
Raha heverin'ny ankamaroan'ny olom-pirenena any amin'ny Repoblikan'i Makedonia ho raharaha matotra ny fifandirana mikasika ny fanomezana anarana  miaraka amin'ny Gresy, ny sasany kosa dia maneho izany amin'ny hatsikana sy ny fanesoana (sariitatra ).
Efa hatry ny ela no nampangain'ny grika ho nampifangaro ny anaran'ireo faritra grika mifanolo-bodirindrina amin'i Makedonia sy ny fanjakana grikan'i Makedonia fahagola ny Repoblikan'i Makedonia.
Mbola nohasarotin'ny ato tsy azo ivalozana avy amin'ny grika tamin'ny fifanolanana momba ny anarana ny fidiran'ny Repoblikan'i Makedonia ao amin'ny vondrona eoropeana sy ny Fikambanan'ny Fifanarahana any Atlantika Avaratra (OTAN) raha tsy ovainy ny anarany mba hanavahana azy amin'ireo fari-pitantànany avaratra.  Nahatonga ny fihanaky ny fankahalàna vahiny teo amin'ny firenena roa tonta izany. Ny ankamaroan'ny olom-pirenen'ny RM dia mihevitra ilay sakana ho fandrahonana manala baraka, raha mino kosa ny ankamaroan'ny olom-pirenena grika fa miandrandra fandresena ireo mpifanolo-bodirindrina ao avaratra.
Samy nandranitra ny fahatsapana fahafaham-baraka sy fahasorenana tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny olana mba hahazoana tombony ara-politika amin'ny dingana “fitiavan-tanindrazana” ireo Nasionalista  avy amin'ny firenena roa tonta. Vokany, nety tamin'ny paikadin'i Rosia amin'ny hanakanana an'i Balkana tsy hivondrona amin'ny vondrona eoropeana sy ny OTAN ny fitohizan'ny fifanolanana amin'ny fanomezana anarana.
Ny hany teboka iraisana momba ny olan'ny fanomezana anarana eo amin'i Makedonia sy Gresy dia tsy raharaha mampihomehy izy ity. Tato anatin'ny ampahefatra taonjato farany, dia tsy misy dikany ny votoaty maneso na mampihomehy raha oharina amin'ny fanehoankevitra mampikorontana sy lahateny feno fankahalàna. Na fanahy iniana na tsia, dia matetika no adika vilana ho kabary fankahalàna ny eso .
Miresaka ireo anarana amin'ny alàlan'ny eson-teny ireo mpanao hatsikana makedoniana sangany
Niaraka niasa tamin'ny haino aman-jery mpamoaka vaovao tsy miankina lehibe ilay mpanao sariitatra Darko Markovikj  (na soratana koa hoe Marković, 1940-2016), mandra-pifanaraky ry zareo na nakaton'ilay governemanta nasionalistan'i VMRO-DPMNE  (nanjaka 2006-2017), tarihin'ilay lehilahy mahery Nikola Gruevski .
Nomena solon'anarana hoe DarMar (tenin-jatovo midika hoe ‘ fikorontanana’ na ‘fisavoritahana’), i Markovikj dia nampiasa sariitatra, fampihomehezana ary sary ampitenenina mba hilazana ny zava-miseho andavanandro sy ireo fivoarana ara-politika. Nandritra izay fotoana ela niasany izay, dia nanohana ny foto-kevitra liberaly sy ny fombàna ny demokrasia izy izay matetika tsy mifanaraka amin'ny sosialisma nahazatra (talohan'ny fahaleovantena) sy ny nasionalisma (taorian'ny fahaleovantena).
Tamin'ny 2009, tamin'ny fotoana nampidiran'i  Gruevski ireo olan'ny fiteny sy ny maha-izy azy ny foko makedoniana tao amin'ireo fifanarahana momba ny fifanolanana amin'ny fanomezana anarana,  dia efa novinanian'i DarMar ny hampifamatorana izany tamin'ny faniriana fitondrana :
“Momba ny OTAN aho… Momba ny Firaisambe Eoropeana aho… Saingy laviko ny hanary ny maha-izaho ahy !” – sariitatra nataon'i Darko Markovikj naparitaky ny Citizens for European Macedonia . Nahazoana alàlana.
Nisy voka-dratsiny naharitra teo amin'ny fahamarinan-toerana iraisam-pirenena ny olana lavarenin'ny fanomezana anarana sady nisy fiantraikany mivantana tamin'ny ativilanin'ny olom-pirenena makedoniana. Ny fahirano ara-toekarena nataon'ny grika (1994-95) sy ny fandroahana ny firenena tsy ho ao anatin'ny Vondrona Eoropeana dia tena nametra ny fahafahana mampiroborobo ny toekarena.
Nampifanoherin'i DarMar tamin'ny kabary nasionalista tsara lahatra mampiady hevitra izany raha toa tokoa ka manan-jo hitaky ny maha-taranak'ireo Makedoniana fahagola  azy ny foko Makedoniana  ankehitriny, sa ireo Slavs tatsimo  ‘ihany’ izay tonga tao amin'ny faritra 1.600 taona lasa izay, ary ankehitriny mbola heverin'ireo nasionalista grika fa ‘vao tonga’ :
“Tsy Makedoniana fahagola intsony aho …… tsy makedonianina Slav ihany koa ..!” – “inona ary ianao amin'izao fotoana izao ?” – ” amin'izao fotoana izao aho dia makedoniana voroaka tamin'ny asa.” Sariitatra nataon'i Darko Markovikj navoaka tamin'ny Citizens for European Macedonia . Nahazoana alàlana.
Vao haingana kely, ny fandaharana fanesoana naseho tamin'ny fahitalavitra ” Ny Vaovaon'ny Omaly” (“Fcerasni novosti”  amin'ny teny makedonianina ) dia nanao vazivazy ilay adihevitra momba ny fanomezana anarana tamin'ny alàlan'ny tantara kely miendrika Monty Python .
Ny renirano Vardar izay mamakivaky an'i Skopje, renivohitry ny Repoblikan'i Makedonia ary avy eo miolaka mianatsimo mankany Gresy, izay Axios no anarana hahafantarana azy any, ary mivarina any amin'ny ranomasina Egée, no resahan'ilay tantara kely. Mananihany ireo mpanao hatsikana anankiroa fa raha ny marina dia tsy fako ireo tavoahangy plastika mitsingevana eny amin'ilay renirano fa ‘ tavoahanagy mitondra hafatra’ ho ” amin'ny fanaovana tsindry momba ny tontolo ekolojika, jeografika ary politika atao amin'ny mpifanolo-bodirindrina amintsika any atsimo.” Mbola tohizan’-dry zareo :
Noho ny fahitàna hoe ireo sata ao amin'ny facebook dia tsy hanampy antsika amin'ny fiarovana ny anarantsika, dia nanapaka hevitra ny hametraka karazana tsindry maro amin'i Gresy ny olom-pirenena. Nanomboka nandefa hafatra tao anaty tavoahangy natsipy tao amin'i Vardar, izay mikoriana mankany amin'ny mpifanolo-bodirindrina atsimo voalaza etsy ambony izy ireo.
Aco: Tangoronà tavoahangy plastika …. Jetza, inona no ho lazaiko, tangorona sa andiany ?
Jelena: Tsy hitako izay ho lazaina. Vakio fotsiny izay voasoratra. … dia aza antsoina hoe Jetza aho.
Aco: Tavoahangy an'arivony no hita mitsingevana eo amin'ny renirano Vardar, nentin'ny orana tsy dia betsaka loatra. Mety ataon'ireo mpandàla ny tontolo iainana masiaka hoe fandripahana ny biby sy ny zava-manirin'i Vardar sady taratry ny halozànay izany. Fa tsy izay ilay izy.
Na dia tahaka ny fako arian'ireo mpanary fako marobe tsy misy eritreritra , na mpanipy fako iray tsy misaina aza ireo tavoahangy ireo, dia ao anatin'ny fanaovana tsindry momba ny tontolo ekolojika, jeografika ary politika atao amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminay any atsimo. Noho ny fahitàna hoe ireo sata ao amin'ny facebook dia tsy hanampy antsika amin'ny fiarovana ny anarantsika, dia nanapaka hevitra ny hametraka karazana tsindry maro amin'i Gresy ny olom-pirenena. Nanomboka nandefa hafatra tao anaty tavoahangy natsipy tao amin'i Vardar, izay mikoriana mankany amin'ny mpifanolo-bodirindrina atsimo voalaza etsy ambony izy ireo.
Mahazo mitony ianao. Ny anarantsika, ny maha-isika antsika ary ny fitenintsika dia voaaro raha mbola misy olom-pirenena miasa loha tahaka ity iray ity.
Ny mpanao politika miady hevitra amin'ny anarana, ireo olom-pirenena kosa nifidy ny fialantsasatra grika
Raha mbola maharomotra ny adihevitra momba ny fanomezana anarana, ny maro amin'ireo olom-pirenena tsotra avy any amin'ny Repoblikan'i Makedonia dia mankasitraka ny mankany Gresy ho toy ny safidy voalohany handehanana miala sasatra sady morontsiraka akaiky indrindra miaraka amin'ny tetibola ampy sy safidim-pitsangatsanganana raitra.
Ny fiantsenàna anaty andro iray dia heverina ho fambara momba ny toerana ara-tsosialin'ny olona, manome fahafahana ho an'ireo olom-pirenena ireo hividy ny marika tsy misy any amin'ny fireneny miaraka amin'ny fankasitrahana ny ‘ fisotroana kafe eny amoron-dranomasina’ any Tesalonika, izay ora vitsivitsy monja avy any Skopje raha mandeha fiara.
Tamin'ity herinandro ity, raha tsindrian-daona miandry ilay efatra andro faran'ny herinandro lava manodidina ireo andro tsy fiasàna roa lehibe eo amin'ny firenena, manomboka ny 24 May ireo makedoniana, ireo antoko mpanohitra kosa, nandà tsy nanaiky ilay sosokevitra famahàna ny olan'ny fanomezana anarana naroson'ny makedoniana sy ny Praiminisitra grika.  Nataon'ilay mpisera iray tao amin'ny twitter vazivazy ny ho ‘ fiantraikan'izany’ amin'ireo mpanao fialantsasatra :
Ho mariky ny fandàvana, hibodo an'i Gresy ny makedoniana.
Manomboka amin'ny Alakamisy ny fanafihana, ka ho voabahana avokoa ny làlana rehetra fiampitàna amin'ny sisintany. Haharitra hatramin'ny Alatsinainy ny hetsika. ‘Euro’ an-tapitrisany no ho sandan'ilay hetsika.
Nilaza ny fikambanan'ireo grika mpivarotra sy tomponà hotely fa tsy matahotra. ” Avia” hoy ny hiakiakan-dry zareo.
Ekena fa ny andro voalohany amin'ilay faran'ny herinandro lava dia nahatarika olom-pirenena makedoniana maherin'ny 10.000 izay nifanisika tao anaty fiara ho any Gresy, niteraka fahatarana teo amin'ny fiampitàna ny sisintany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/06/10/120123/
 Citizens for European Macedonia: http://www.gem.org.mk
 fifandirana mikasika ny fanomezana anarana: https://en.wikipedia.org/wiki/Macedonia_naming_dispute
 fari-pitantànany avaratra.: https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_regions_of_Greece
 matetika no adika vilana ho kabary fankahalàna ny eso: https://globalvoices.org/2018/03/08/how-greek-anti-nationalist-satire-was-misunderstood-as-hate-speech-in-macedonian-media/
 fahirano ara-toekarena nataon'ny grika : https://www.nytimes.com/1995/10/16/world/macedonia-embargo-is-halted-by-greece.html
 Makedoniana fahagola: https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Macedonians
 foko Makedoniana: https://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_(ethnic_group)
 Slavs tatsimo: https://en.wikipedia.org/wiki/South_Slavs
 “Fcerasni novosti”: https://www.youtube.com/channel/UC5_dpZJ3XmZ7RkcUvmtAG9w
 Ny renirano Vardar : https://en.wikipedia.org/wiki/Vardar
 nandà tsy nanaiky ilay sosokevitra famahàna ny olan'ny fanomezana anarana naroson'ny makedoniana sy ny Praiminisitra grika.: https://www.neweurope.eu/article/name-dispute-negotiations-zaevs-ilinden-gambit-melts-athens-skopje/
 olom-pirenena makedoniana maherin'ny 10.000 izay nifanisika tao anaty fiara ho any Gresy, : https://www.24.mk/prodolzhen-vikend-povekje-od-10-000-gragjani-zaminaa-vo-grcija